08 martsa 2019 : "vehivavy mandray andraikitra" | Primature
Nizara roa ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an’ny vehivavy teto amin’ny fiadidian’ny Praiminisitra. Nisy ny asa sosialy izay nanoloran’ny solontenan’ny vehivavy eto anivon’ny Primatiora fanohanana ara-pitaovana ho an’ny « Centre Sembana Mijoro » eny Analamahitsy, izay notarihin-dRamatoa Léa Ntsay, vadin’ny Praiminisitra. Nisy ny fanaovana diabe manodidina ny Lapa sy famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra, izay nibanjinana ny lohahevitra « zo sy anjara andraikitry ny vehivavy ho an’ny fampandrosoana » tamin’izao fanamarihana izao.
Nampita hafatra ho an’ny vehivavy Malagasy rehetra Ramatoa vadin’ny Praiminisitra, nilazany fa « mahavita zavatra betsaka ny vehivavy ary hanatanterahana izany dia mila matoky ny fahaizana sy ny traikefa ananantsika isika, fa indrindra ny fametrahana tanjona. Ilaina ihany koa ny fifamenoana eo amin’ny mpivady amin’ny andraikitra izay sahanina ».
Nanome voninahitra ny lanonam-pankalazana ny 08 martsa niraisan’ny vehivavy rehetra eto anivon’ny Primatiora ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian ary nanambara fa ny lalan’ny fampandrosoana dia mila olona vonona amin’izany ka hitondrany ny anjara birikiny. Ny fahafahana mandray anjara amin’ny fampandrosoana anefa dia miankina amin’ny fampitoviana fijery mba hahafahana mizotra sy mibanjina tanjona iraisana. Noho izany dia tokony hiainana amin’ny andavanandro fa indrindra amin’ny adidy sy ny andraikitra raisina io lohahevitra nentina nanamarihana ny andron’ny vehivavy io, hoy hatrany izy. Misy anefa ny sakana tsy hahatrarana izany tanjona izany, matetika izy ireny eny anivon’ny fiaraha-monina na ny fomba amam-panao izay efa nilaozan’ny toetr’andro, ka ny fanovàna famindra ihany no hahafahana mahazo vokatra. Maro an’isa ny vehivavy sy ny tanora kanefa dia zary lasa vesatra ho an’ny firenena raha tokony ho fototra lehibe entina mampandroso. Ho setrin’izay, hoy ihany ny Praiminisitra, dia hisy ny drafitra hapetraky ny fitondram-panjakana tsy ho ela, hanovana ny toeran’ny vehivavy indrindra fa ny tanora eto anivon’ny firenena.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 06 Mars 2019
Rencontre avec le Rotary International District 9220 →
Télécharger les trois projets de lois organiques relatives aux élections